Fitsangatsanganana amerikana: mahakivy ny famerana ny fitsangatsanganana ataon'ny EU
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Fitsangatsanganana amerikana: mahakivy ny famerana ny fitsangatsanganana ataon'ny EU
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Aogositra 30, 2021
Ny fitsangatsanganana dia singa iray lehibe amin'ny toekarena manerantany ary ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny fahasimban'ny toekarena amin'ny areti-mandringana.
Ny komisiona eropeana dia mamporisika ny fameperana ny dia ho an'ireo mpandeha amerikana mankany EU.
Firenena eropeana maro no niaina fitomboana tamin'ny famangiana niditra tamin'ity fahavaratra ity.
Mamporisika ny EU ny EU Travel mba hisokatra hatrany amin'ireo Amerikanina vita vaksiny.
Ny filoha lefitra misahana ny raharaham-bahiny amerikanina Tori Emerson Barnes dia namoaka ity fanambarana manaraka ity tamin'ny vaovao nanoro hevitra ny Vondron Eropeana hanala an'i Etazonia amin'ny lisitry ny firenena tokony hanafoanana ny fameperana ny dia:
“Fivoarana mahakivy ity taorian'ny fanamafisana ny fitsidihana fidiran'ny mpitsangatsangana vita vaksiny izay niainan'ny firenena eropeana maro tamin'ity fahavaratra ity. Fahavoazana io na eo aza ny fiakaran'ny vaksiny — ilay fitaovana mahomby indrindra amin'ny fanoherana — izay miakatra amin'ny lafiny roa amin'ny Atlantika.
“Ny fitsangatsanganana dia singa iray lehibe amin'ny toekarena manerantany ary ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny fahasimban'ny toekarena amin'ny areti-mandringana. Fitsangatsanganana US mamporisika ny EU mba hisokatra hatrany amin'ireo Amerikanina vita vaksiny, ary koa mamporisika an'i Etazonia mba handray fepetra haingana hanombohana fandraisana olona vita vaksiny ary hamerina amin'ny laoniny ny toekarem-pitaterantsika. ”
Tompon'andraikitra ao amin'ny Vondrona eropeana ankehitriny soso-kevitra hampiatoana ny dia tsy ilaina rehetra avy any Etazonia satria nisesisesy ny tranga amerikana COVID-19 vaovao.
ankehitriny fanambarana avy amin'ny filankevitra eropeana dia mitaky fanolorana ho an'ireo firenena mpikambana miisa 27 ao amin'ny bloc, izay mitazona ny fiandrianam-pirenena amin'ny lafiny ara-teknika.
Mihidy ny birao fizahan-tany any Bahamas any Paris noho ny ...
Fizahan-tany Arabia Saodita amin'ny iraka manan-danja any Italia
Fantaro i Mary Rhodes, ilay Mahery fo momba ny fizahantany vaovao avy any Guam, Etazonia
Nitrangana korontana mahery vaika tany Suisse noho ny COVID-19 ...
Farafahakeliny 41 no maty, 80 no naratra tamin'ny afon-tranon'ny Jakarta
Aostralia: tsy tadiavina ny mpitsoa-ponenana Afghana!
Ho tafavoaka velona ka hiroborobo! UNWTO, tonga ny famolavolana endrika ...
Delta dia manohy ny sidina Atlanta-San José tsy miato
Lalana mankany amin'ny repoblika: Nifidy ny voalohany i Barbados...
Firy no atao hoe Whisky? Ahoana ny amin'ny $60,000 ho an'ny...
Qatar Airways mpikambana vaovao ao amin'ny ICAO Global Sustainable ...
Seychelles ao amin'ny Spotlight amin'ny hetsika Virtual Virtual Italiana
Volkano Advisory navoaka tany Hawai'i
Vonona i Kenya ho toerana vaovao ho an'ny UNWTO General...
Nanjary haingana be kokoa ny sidina nankany Zambia na Zimbabwe ...
Yanina Gavrilova no mahery fo voalohany amin'ny fizahan-tany Okrainiana
"Tsatokazo Swipe-sandal" ho an'ny mpivady nahita fitiavana ...
Tsy handroaka ny mpiasan'izy ireo ny Southwest Airlines ...
Ny fizahantany any India dia hivoaka amin'ny alàlan'ny sarimihetsika, fanatanjahantena ...
Fankalazana sambatra rehefa tafita ny seychelles izao amin'ny taona 2020 ...
Ny minisitry ny fizahantany any Seychelles dia mijery ny kely ...
Sidina tsy miato avy any Toronto mankany Dublin amin'ny WestJet izao
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia nanendry ny vondron-kery hanamafisana ...
Mitombo ny vola miditra ao amin'ny Hotely Hawaii mandritra ny COVID-19 ...
Nisondrotra ny fizahantany Sorrento Coast taorian'ny areti-mando irery ...
Ny birao mpitantana ny seranam-piaramanidina Prague dia mifidy filoha vaovao
Sandaly® Resorts Executive Executive dia ekena ho manerantany ...
Airbnb: tanàna amerikana latina 11 tsara indrindra ho an'i Etazonia ...
Etazonia no mitana ny laharana pasipaoro vaovao manerantany
Nofaranan'i Norvezy ny fameperana COVID-19 rehetra, miverina amin'ny ...
Nianjera tany an-tany efitr'i Kalifornia ny fiaramanidina mpiady Super Hornet
Vaksinin'ny ADN COVID-19 voalohany manerantany nankatoavina tany India
Airlines izay manakarena amin'ny sidina efa ho tapitra ...
Condor Airlines manohy ny sidina mankany amin'ireo Nosy Paradise ...
ProCare Health novidin'ny Clinigence Holdings
Misimisy kokoa momba ny volan'ny Investors Bulgarian ho an'ny ...
Ny sehatra Saudi Arabia no setriny! 1000+ saina manam-pahaizana handroso ...
Sidina iraisam-pirenena India: fampiatoana mihantona ...
Tale Mpanatanteraka Vonjimaika Vaovao hitarika ao amin'ny TPDCo
Mividy ny politikam-piantohana ara-pahasalamana? Aza adino ny zavatra 5
Nanambara ny Antenimieran'ny varotra Indo-Alemanina vaovao ...
Airbus sy Air France dia mikendry ny fahombiazan'ny angovo betsaka ...
Airbus hanamafisana ny fifandraisana an-tsisintany ...
Ny fitsapana antibody COVID-19 vaovao dia mila indray mandeha isaky ny 6 fotsiny ...
Michael K. hoy:
September 9, 2021 ao amin'ny 14: 15
Eny, nametra izany fameperana izany ihany i Etazonia (talohan'ny UE) ho an'ny mpandeha Eoropeana hatramin'ny fiandohan'ny taona lasa, ary mbola mijanona eo izany.
Mandiso fanantenana ny roa tonta.
Susan Sheats hoy:
30 Aogositra 2021 amin'ny 16:42
hmmm… Noheveriko fa tolo-kevitra fotsiny ihany no ho azon'ny firenena tsirairay atao raha hitany fa mety. Italia dia efa manome baiko ny fanaovana vaksiny feno, sarontava amin'ny toerana malalaka rehetra ary ny fitsapana ny kobidia ratsy. Raha toa ka nanaiky ireo torolàlana ireo ny firenen-kafa dia mety ho antonony sy hanampy hiantoka ny fiarovana ny tsirairay. Ity fanambarana ity dia azo avadika ho tsara ho an'ny mpandeha ny feon'ny fieritreretana ary hafatra ho an'ireo izay tsy mety mihevitra ny fiarovana ny hafa hijanona ao an-trano.